Madaxweyne Xassan sheekh oo R/W CCC uga digay in liiska uu ka saaro Laba Wasiir |
Madaxweyne Xassan sheekh oo R/W CCC uga digay in liiska uu ka saaro Laba Wasiir
Muqdisho (Somalimedia.co.uk)-Ilo wareedyo ka tirsan Madaxtooyada Somalia, ayaa kusoo waramaayo in Ra’isul wasaaraha dalka Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke looga digay in Liiska Xukuumada cusub uu ka saaro Laba wasiir oo aad ugu dhow Madaxweyne Xassan Sheekh.
Ilo wareedka ayaa sheegaya in kulan Aqalka Madaxtooyada ku dhexmaray Madaxweynaha iyo Ra’isul wasaaraha ay uga wada hadleen Arrinka la xiriira dhismaha Xukuumada uu R/W CC soo dhisaayo maalmaha nagu soo beegan, waxaana la soo warinayaa in Xassan Sheekh uu Cumar Cabdirashiid uga digay in Liiska wasiirada cusub laga saaro Wasiirada kala ah Faarax C/qaadir iyo Xuseen Cabdi Xalane oo ah Sii haayaha wasaarada Maaliyada.
Arrintaani ayaa waxa ay imaaneysaa xili Ra’isul wasaaraha dalka uu go’aan ku qaatay inuu kala diro Wasiiradii uu soo magacaabay, waxa ayna taasi walaac ku beertay Madaxweyne Xassan oo halkaasi ku waayay dhowr wasiir oo isaga la imaaday.
Dhanka kale, Madaxweynaha ayaa waxa uu xiligaani wadaa Qorsho uu dib ugu soo celinaayo Labadaasi Wasiir uu sida gaarka ah u aaminsan yahay, waxaana suuragal ah in Ra’isul wasaare Cumar uu ka biyo diido in Faarax C/qaadir lagu soo daro Xukuumadiisa, maadama uu kamid yahay ragga sida gaarka ah ay Xildhibaanada uga soo horjeedan.
Ra’isul wasaaraha ayaa dhankiisa kasoo horjeeda in Xukuumada uu soo dhisi doono kusoo daro Afartii wasiir ee Horay looga digay, iyadoona ay suuragal tahay in dhamaan Xukuumada cusub uu kala imaado dalka dibadiisa.